‘प्रचार प्रसारको अभावमा प्राचिनतम उपचार पद्दती ओझेलमा’ – purnakhabar.com
‘प्रचार प्रसारको अभावमा प्राचिनतम उपचार पद्दती ओझेलमा’
Posted on September 28, 2018 Author purnakhabar	Comment(0)
१२ असोज, वीरगञ्ज । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले पुराना चिकित्सा पद्दतीको बारेमा प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले प्रचारप्रसारको अभावमा प्राचिनतम एवंम उपयोगी चिकित्सा पद्दतीहरु ओझेलमा परेको बताए ।
वीरगञ्जमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय एक्युप्रेशर कन्फ्रेन्समा बोल्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बाबा रामदेवले योगबाट स्वस्थ बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रचार गरेकै कारण उनी सफल भएको दावी गरे ।
‘यो पद्दतीले जीवनलाई स्वस्थ राख्छ, यसले साइड ईफेक्ट गर्दैन, यस्ता कुराहरुको बारेमा प्रचार प्रसार गरेर मानिसहरुलाई सूचना दिन सक्यौं भने यो उपचार पद्दती हाम्रो अभिन्न अंग हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुनै नयाँ चिकित्सा पद्दती होईन, प्राचिनतम उपचार पद्दती हो । रामदेव बाबा भन्दा पहिलेपनि विभिन्न योग गुरुले अनुलोम विलोम, कपालभाँती गर्थे तर उनले प्रचार गरे, योगले मानिस स्वास्थ रहन सक्छन । अहिले अधिकांश योग गर्छन् ।’
नेपाल भारत सहयोग मञ्च वीरगञ्जसँगको समन्वयमा बिहार एक्युप्रेसर योग कलेज गान्धी सेतु लिंक पथ विस्कोमान कोलोनी पटनाले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
जैन तेरापन्थी भवन आदर्शनगरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले ऐलोपेथिक उपचार पद्दतीका कारण सस्तो, सुलभ र उपयोगी प्राचिनतम उपचार पद्दतीहरुको प्रचार हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले हानी रहित, कम खर्चिलो र अत्यन्त प्रभावकारी चिकित्सा पद्दती एक्युप्रेसर नेपालमा पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रदेश नं २ मा एउटा एक्युप्रेसर अध्यापन हुने विश्व विद्यालय नै आवश्यक रहेको बताए ।
एक्युप्रेसर महागुरु डा सर्वदेव प्रसाद गुप्ताले कार्यक्रममा एक्युप्रेशर चिकित्सा पद्दतीको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
सोही अवसरमा मुख्य मन्त्री गद्दी लगायतका अतिथीहरुले मिसन वेजिटेरियन पुस्तकको विमोचन समेत गरिएको नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक वैद्यले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा एक्युप्रेसर पद्दतीबाट उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका र विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान दिएका व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।
प्राणघातक हेपाटाइटिस बीः कसलाई, किन लाग्छ ? कसरी बँच्ने ?
परिवर्तिन जीवनशैली र स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा कैयौँ प्रकारका स्वास्थ्य समस्या हुन्छन् । त्यसमा पनि एउटा यस्तो प्राणघातक रोगले धेरैलाई सताउन थालेको छ जसलाई एड्सभन्दा पनि खतरनाक मान्न थालिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसन्धानले विश्वमा एड्सभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हेपाटाटिस बीको कारण भइरहेको बताउँछ । शरीरमा एचबिभी भाइरस फैलिएपछि यो रोग लाग्ने गर्छ । यो […]
टि–ट्वान्टी महिला विश्वकपः पाकिस्तानद्वारा आयरल्यान्ड पराजित
Posted on November 14, 2018 Author purnakhabar
२८ कात्तिक, काठमाडौं । टि–ट्वान्टी महिला विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले आयरल्यान्डलाई ३८ रनले पराजित गरेको छ । बुधबार विहान सम्पन्न खेलमा पाकिस्तानले आयरल्याण्डलाई पराजित गर्दै विश्वकपमा पहिलो जित समेत निकालेको हो । १ सय ४० रनको चुनौति पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको आयारल्यान्डले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा १०१ रन मात्र बनाउन सक्यो । आयरल्याण्डका लागि आईसोबेल […]
व्यापारलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसंग जोडौंः मुख्यमन्त्री पोखरेल
Posted on October 5, 2018 Author purnakhabar
१९ असोज,बुटवल । उद्योग व्यापार संघ बुटवल रूपन्देहीको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देही र बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रवर्द्धनमा बुटवलमा तेस्रो औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला सुरु भएको छ । बुटवल मण्डपमा सञ्चालित मेलाको शुक्रबार प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री संकर पोखरेलले उद्घाटन गरे । मेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्य मन्त्री पोखरेलले व्यापार व्यवसायलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसंग नजोडेसम्म […]
धर्मश्री प्रतियोगिता असोज तेस्रो साता